Ndingaite Sei Kuti Ndibudirire nePinterest? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 487
Pinterest ipuratifomu nhasi inopa vanhu mvumo yekuratidza kwavo kwakanyanya uye kurota nezve ramangwana mapurojekiti avanoda kuzadzisa. Kune izvi zvese kuratidzwa kwekutsungirira kunokosha asi pamusoro pezvose, kubatana kuchashanda senzira inokosha yekubudirira.
Kunyangwe mamwe mapuratifomu achikukumbira kuti uoneke mumavhidhiyo einenge gumi masekondi mukati meapi emapeji, paPinterest zvinoitika zvinoitika. Chimwe chezvinhu vanhu vanofarira kubudirira kune network vanofanira kuita kugadzira mikana uye mazano enharaunda.
Vanhu vanotarisa sarudzo paPinterest vanoona zvakanakisa zvavo kugadzirisa dzimba dzavo, nzvimbo dzekushandira uye kunyangwe kutanga mapurojekiti ako wega. Kutenda kune zvese izvi, zvese zvinoonekwa papuratifomu zvichaitwa.
Vazhinji vashandisi vakaratidza izvo Pinterest ndeimwe yemapuratifomu akanakisa izvo zvave zviri kuzadzisa zviroto uye mazano evashandisi nhasi. Kubva pakusikwa kwayo, haina kukwanisa kuenda isina kucherechedzwa kurwira kwainochengetedza kuti isafanana nemamwe maratidziro uye nekuda kweizvi, dzivisa matambudziko emunguva yemberi.
Ino nguva, iwe unozodzidza zvishoma nezve maitiro ekuvandudza iyo mhando yezvinoitwa mukati mePinterest uye pamusoro pezvose, maitiro aungaenderera mberi nezvose zvigadzirwa zvekugadzira zvaunofanira kufarira.
Iva nehukama nemamwe manetwork
Zvichienderana nekuti zviitiko zvipi zvichaburitswa paPinterest uye pamusoro pezvose, mifananidzo yavanofanirwa kugadzira, iri zano rakanaka kuisa mukati mashandiro emakiyi ekubatanidza.
Mukana uyu unogamuchira vamwe vashandisi kuti vaone zvese zvitsva zvavanofanira kupa panguva yakakodzera. Uye zvakare, kushambadza kunosvika nguva dzese nenzvimbo kuti uwane mhedzisiro iri nani.
Gadzirisa yako URL
Kana iwe uchida kuti vamwe vanhu vakuwane mumainjini ekutsvaga, iwe ungatofanira kugadzirisa iyo URL kuti uwane zvirinani. Kubva ipapo, vanhu vachazara pinda kubva chero kupi kune yako Pinterest chikuva.
Tsanangura mifananidzo yako
Paunenge uchigadzira bhodhi, kana kungoita mapini matsva, zvinonyanya kukosha kuti iwe uise tsananguro. Izvi zvinobatsira vashandisi kuziva kwauri kubva nekwauri kuenda usinga cheke kutenderera uye kusawana zvavanoda kana vasina.
Ipfungwa zvakare yakanaka kuita zvese SEO ruzivo iyo iwe yaunogona kuwana kana kuda kuwana. Pasina mubvunzo, nekuda kweizvi, vanhu vazhinji vanogona kukuwana iwe pachikuva.
Chii chisingafanirwe kuitwa paPinterest?
Zvino, zvakakosha kuti iwe uzive izvo zvinhu zvisina kukodzera kutora chikamu muPinterest.
Iwe unofanirwa kudzivirira kutumira zvinonyadzisa kana zvinyadzo mifananidzo paPinterest
Iwe haugone kugumbusa vashandisi papuratifomu
Izvo zvinodikanwa kuti iwe upindure kune ese mameseji mukati mePinterest
Iwo mapini ekugovana anofanirwa kunge ari pabhodhi kurongeka zvirinani
Akaundi yako ichagara ichiongororwa kuti uzive zviitiko zvacho
1 Budirira paPinterest
1.1 Iva nehukama nemamwe manetwork
1.2 Gadzirisa yako URL
1.3 Tsanangura mifananidzo yako
2 Chii chisingafanirwe kuitwa paPinterest?